Xa sele uhlangene iminyaka emininzi kwaye uqaphela ukuba umgama ongaphezulu nangaphezulu uvela phakathi kwakho, wenza uthando ngaphantsi nangaphantsi kangako, ukuvakalelwa okutsha kubonakala kuvaliwe, uze uqale ukuza kumbuzo: "Indlela yokuhlaziya ubuhlobo kunye nomfana?" .
Emva koko uqala ukuzibuza ukuba yintoni ongenakukufumana nje ubuhlobo obunjalo kunye nomfana, kodwa kunye nezinye izibini? Kodwa, hayi, hayi. Amabhinqa amaninzi avumile ukuba nabo bajamelene nale nkathazo, kodwa ke baphumelele impumelelo kunye nokuqonda. Kodwa umbuzo uwukuba: "Baye bafezekisa njani loo mphumo?" Nazi ezinye izicwangciso ezivela kwi-sexologist, psychotherapists, kunye nje "nabafazi abanamava" asebancede abaninzi.
1. Ukwabelana ngesondo kukuvakalelwa ezulwini
Ininzi yezobulili ezidumileyo, uDilya Enikeeva, ukuhlabelela, ukuthelekisa ne-duet. Mhlawumbi uya kuvuma ukuba isondo kwishumi elinesibhozo iminyaka sihluke kwiminyaka engamashumi amathathu yesini. Emva kwakho konke, kuphela ebusheni uvakalelwa ukuba udlala njani i-hormone egazini lakho, ungalali ubusuku, kodwa kusasa uvakalelwa kukuba uncoko ngaphezu kwe-rose, ngaphambi kokuba ilizwe lizele ithemba kunye nezicwangciso, ulungile, njengoAphrodite kwaye uyavuya. Unyaka emva konyaka, basusa kuwe ubuhle kunye nokuzithemba, ngokukhawuleza xa umyeni ephinda ephinda ngokuphindaphinda ngamapounds angaphezulu kunye nemibono yonke ephawulekayo, yonke imikhosi iya kwintsapho, ayikho ixesha elaneleyo lokulala, ingathethi ngesondo.
Kodwa ke, ukuba isi sibini sinelisekile ngobuhlobo babo obusondeleyo, ngoko imvelaphi yenziwa apho ubudlelwane bezinye iindawo buqala ukuphuhlisa. Le mvelaphi ifuthe kakuhle impumelelo yobudlelwane nomntu.
Kuloo meko kuba njani? Sisiphi isizathu? Ngaba ubona yonke into kakuhle kwimibutho yakho yemihla ngemihla? Ukuba akunjalo, zama ukufumana loo ngongoma yomzwelo yongxaki phakathi kobudlelwane bakho.
2. Zama into yokuba uxolelane
Ngaba kuvela ukuphazamiseka ukuba asize sikhohlwe ukulahla zonke iingxaki eziqokelelweyo ngosuku, zonke iimangalo, ingxaki kumyeni, kodwa sibonakala sikhohlwa ukubonisa isisa. Kwaye nantsi enye into ebalulekileyo yokuqala kokutshatyalaliswa kobudlelwane bakho. Uyakhumbula xa wanika indoda yakho ikhofi ebhedini? Yaye nini umyeni wakho ekugqibeleni ahlambe umva wakho kwishazi?
Elinye iqela linemiphephelo yalo yokubonakalisa ukunyamekela nothando, ngoko ke uye phantsi kwakho! Xa usoloko ubonisa iimvakalelo zakho ezintle, uzinzileyo ziza kuba ziintlobano zesini!
3. Xa umzimba ukhathele-ke uphume kuwo, akuyinto engaqhelekanga, isondo esinileyo
Mhlawumbi, abaninzi bawela kuloo meko, xa indoda iqala ukubonisa isicwangciso, kodwa ufuna ukulala? Xa uthe, hayi-ke umyeni uhlala ehlamba xa uthi u-ewe-ke ekugqibeleni ulala uphelile. Ngamanye amaxesha kwenzeka enye indlela, xa indoda isele iphendule kuwe "intloko ibuhlungu." Ngokuqinisekileyo kwimeko apho kufuneka uphumle. Abanye banikela abantwana babo kunina, kwaye ngeveki bacela oogxa babo, ababaziyo, abanye-abangafuneki ukukhawuleza kusasa, baze bathathe isondo ukuya kusasa, okwesithathu - babeka abantwana ukuba balele, baze banike ixesha.
4. Zonke iingxaki ezisemva komnyango!
Ukunxibelelana ngomnxeba kunye nabahlobo kunokuhlehliselwa kude kube yimva. Iingxaki ze-ofisi endlwini zingasusi, amaxwebhu anokukwazi ukulinda emsebenzini. Kwimeko apho ulinde ifowuni ebalulekileyo, vula umshini wokuphendula. Ukuba usuku luye lwaba lukhuni kwaye kukho iingxaki ezingaphendululwayo, kungcono ukuba ungacwangcanga ubuhlobo obusondeleyo, kuba awuyi kuphumla kwezo ngcamango osufuna izinto ezininzi. Ukuba ugcina ubuncinci kule mithetho, kufuneka ufumane ithuba lokuba uphumelele ukuhlaziya ubuhlobo bakho.
5. Sithetha izicwangciso zethu kumyeni
Ukuba uthetha ngendlela efana nezoshishino: "Ukuncedisa, sinokuhlwa ngokulala!" - oku kuya kuba yimeko ehluke ngokupheleleyo. Ungabizi ngamashumi amabini ngemini, ukuba undikhumbuze ukuba kuya kudala, kwaye ulindele lo busuku. Unokubuya ekhaya uvela kwisiqingatha somsebenzi weeyure ngaphambili kwaye wenze isidlo esilula, esiya kuba mnandi kakhulu kumlingane wakho, unokuyinyamekela i-champagne okanye iwayini, uya kuhlamba okanye ukuhlamba - xa ukwakha isimo sengqondo esifanelekileyo, indoda yakho iya kuvakalelwa.
6. Qaphela - imigibe!
Xa usebenzisa isimo esifanayo kwindawo yokulala - oku kuya kuba esinye isicupho, ngokubhekiselele kwizondo zesondo. Oko kukuthi, ukuba uhlala udla iifatata ezifakweyo, ihora liza kufika xa kukhangeleka nje kuphela okuza kuzisa isisongela. Oku kukukhokelela ekubeni "isidlo sakho se-pastel" sidinga ukuhluka.
7. Umyeni akayintombi yakho!
Ukuba nolwalamano lwakho aluyi kuhlabalala usuku nosuku, ungakhohlwa ukuba kunye nomyeni wakho, kungekhona intombi. Kwaye kunzima ukuba uyiphume yonke imihla. Musa ukutyhila zonke iimpazamo zakho, ukuba unayo i-kg kg eyongezelelweyo, okanye unayo ukubola kwezinyo - oku kuya kuqala ukuhlambalaza umyeni wakho kwaye uya kukhwabanisa ukuba ngathi ulahla zonke iingxaki zakho.
8. Ubumnandi buhle!
Ewe, isondo esingathí sina sinokukhumbuza intlanganiso yezoshishino, ngoko indlela yokuvuselela ubuhlobo bakho kukuhleka.
9. Iikhumbuzo zibambisana!
Ukuba phakathi kwakho kukho kubanda, iifoto ezindala, iinkumbulo ezithakazelisayo, ziya kukunceda ukhumbule indlela uqhubeka uthanda ngayo.
10. Yiza ngothando.
Abaninzi baya kuvuma ukuba kunzima ukudlala ngothando nomyeni wakho! Kodwa! Zama ukuhamba ukuxelela imeko yakho yesikhathi esizayo yobusuku obukhulu ukuba u tyelele ukuzama ukumnxusa ngokuguqa idolo kwaye uzama ukunyuka phezulu. Zininzi iindlela, into ephambili kukuba ukhethe enye indoda yakho ithandayo! Ngaba ndifuna ukukufundisa? Ungakulibali ukuba ukunyamezela kwakho kusekho nawe, kodwa kuphela kuhlanganiswe ngothuli, kuba ixesha elide akukho mntu ulisebenzise, ​​nwabele ubomi!
Ksenia Ivanova , ngakumbi kwisiza
Ngaba kukho ubuhlobo phakathi kwendoda nomfazi
Ukuqhelana nabafana abaneminyaka eyi-10-13
Izipho zeentombazana zeSuku lweValentine
Ingaba umfazi oqinileyo unokufumana uthando?
Uyithanda njani umfana? Iimpendulo zinikezwa ngamadoda aneminyaka engama-20 ukuya ku-55
Ukumkelwa komntwana njani?
Ikhekhe leshokoledi kunye nencoko yamanzi
Umfazi kaGarik Martirosyan "waphonsa" u-Alsou ngeeruble ezigidi
Primrose: izityalo zangaphakathi
Amanyathelo okunyamekela izinwele
Umvuzo "Kususela ngoMatshi 8!"
I-Dandruff: izizathu zokubonakala kwayo nezindlela zokuzilahla